Abuu Hurayra iyo Mucaawiya – Kaasho Maanka
Dadka sunniga ahi waxa ay sheegaan in uu Abuu Hurayra saaxiib la ahaa nin yuhuud ah oo ka mid ahaa dadka abuura sheekooyinka. Xilligaas ma ay jirin sheeko faneed oo lagu sawiro nolosha iyo riwaayado dadka lagu horumariyaa ee waxaa jirey qof dadka u sheekeeya oo ka qisooda boqorrada, nebiyada iyo madaxda isaga oo adeegsanaya awooddiisa sheekoyahannimo. Yuhuudka ay Abuu Hurayra saaxiibka ahaayeen dabcan waxa uu takhasus ku ahaa sidii sheekooyin looga curin lahaa nimankii yuhuudda ahaa oo ay tolkood nebiyada u yaqiinneen.
Waxaa la weriyey in uu Abuu Hurayra sheekooyinka xiisaha leh bilaabay markii muddo laga joogey dhimashadii Maxamed, waxa uuna xoogga saaray in uu Maxamed ka sameeyo sheekooyin loo bogo oo bulshada ku habboonaa. Dabcan saaxiibkiis oo xagga yuhuudda qisooyin ka samaynayey bay isku xirnaayeen, mid labadooda khibrad badnaana la ma ogaan karo.
Sida kutubta sunniyiinta ku qoran Abuu Hurayra waxa uu sheekoyahannimadii ugu weyneyd la soo baxay xilligii Cumar Khidaab, waxa uuna samaystay dad dhegaysta oo uu marba sheeko u mariyo isaga oo Maxamed keli ah ka qisoonayey maaddaama dadka Madiina joogey ay taageero u hayeen nebiga scw. Sida riwaayadaha qaar ku taal Cumar Khidaab waxa uu la yaabay ninka shacabka ka mid ah oo hadalka badan oo uusan garanayn shubaya oo weliba nebigii ka sheegaya. Cumar Khidaab aad buu u xanaaqey, waxa uuna yiri ”Abuu Hurayra haddii aadan joojin waxan aad dadka ku dhuraysid jeedal baan ku la dhacayaa!”. Xilligii uu Cumar Khidaab madaxda ahaa Abuu Hurayra aad buu isu ilaalin jirey oo qisooyinka uu Maxamed ka sheegayo meelo qarsoon buu la eegan jirey. Waxa laga yaabaa in uu wax uun hanti ah ku heli jirey.
QORMO LA XIRIIRTA: Maxay tahay xikmadda ku jirta jaridda gacanta tuugga?
Shiicadu waxa ay Abuu Hurayra u yaqaanniin dadka ninka ugu been badnaa. Sida la isku raacay Abuu Hurayra sanad iyo bar buu muslim ahaa markii uu Maxamed dhintay. Waxaa shaki badan keeni karta sida uu Abuu Hurayra nebiga uga ogaadey waxaas oo qisooyin ah oo aysan ogeyn Abuukar, Cumar, Cismaan iyo Cali! Shiicadu iyaga oo arrintaas ka duulaya oo eegaya in uu Abuu Hurayra muddo yar diinta ku jirey markii uu Maxamed dhintay bay waxa ay xukumeen in uu Abuu Hurayra yahay ninka ugu been badnaa waxa uu Eebbe abuuray.
Haddii aynu u gudubno Mucaawiya waxaa jirta qiso caan ah oo markii uu nebigu scw qabsaday Makka dhacday. Waxa ay ahayd in Abuu Sufyaan oo Mucaawiya dhalay oo madax u ahaa qabiilkii ay nebiga isla ahaayeen uu aad uga xumaaday in uu Maxamed magaalada qabsaday. Isaga iyo Cabbaas oo nebiga adeerkiis ahaa habeen dhan baysan seexan oo ay ka doodayeen sidii laga yeeli lahaa Maxamed iyo ciidankiisa dhulka qabsaday. Cabbaas waxa uu keenay talo wanaagsan oo ahayd in Maxamed la la heshiiyo oo la la qaybsado dowladda islaamka. Taladaas Abuu Sufyaan ugu danbayn waa uu qaatay, waxa uuna nebiga ku la heshiiyey arrimo badan, waxaana ka mid ahaa in uu wiilkiisa Mucaawya ah ka dhigo ninka waxyiga qora. Dad baa sheega in uu Abuu Sufyaan rabey in uu wiilkiisu marka uu masuuliyadda waxyiga la wareego quraanka ka saaro inta lagu caayayo Abuu Sufyaan iyo reer Banuu Umaya oo dhan.
Waxa la sheegaa muddadii uu Mucaawiya ku hawlanaa ka la shaandaynta quraanka in uu nebigu maalin saddex jeer oo isku xiga u yeeray oo saddexdii jeerba loo sheegay in uu Mucaawiya wax cunayo. Ka dib nebugu waxa uu ku yiri ”Eebbe calooshaada weligiis ma dhergiyo!”.
QORMO LA XIRIIRTA: Islaamku muxuu ka qabaa qofka ka noqda diinta (Murtad)?
Sida la weriyo Mucaawiya aad buu cuntada u jeclaa siiba hilibka, waxa ayna cuntayntu ka qaadan jirtey xilli aad u dheer. Markii danbe ee uu boqorka noqday waxa uu hilibka ku cuni jirey khamri badan, sida la og yahayna aalkolada ama khamrigu waxa uu keenaa gaajo been ah oo aan qofka hayn. Qofka khaldan ee waxyaalahaas cabbaa waxa uu jeclaysanayaa in uu sii cabbo, mar kasta oo uu sii cabbana gaajo ayaa ku kacaysa. Dowladdiisii iyo boqortooyadiisii ka danbaysey aad bay u tunteen. Sidaas darteed Mucaawiya iyo boqorradii dhaxlay waxaa dhammaantood laayey cudur hilibka badan laga qaado oo ay carabtii ka danbaysey u bixiyeen cudurka boqorrada.
Abu Hurayra Mucaawiya
Shaydaankii la xidhay!
Waxaa inbadan dhegahayga kusoo dhaca gaar ahaan bisha Ramadaan ereyada “Shaydaanki waa la xidhay”, inbadan oo Soomaali ah ama muslimiin ahina waa maqashay, waxaan is waydiiyey shaydaanka la xidhay waa kee? yaase shaydaan ah? ereyga shaydaan muxuu yahay? in wax la iswaydiiya waa muhiim waayo wax iska qaadashadu waxay disha garashada. Ereyga (الشيطان) af ahaan waxay ku qeexeen fogeyn...
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 7th March 2018